ဘာမှမကူညီမထောက်ပံ့ပေးဖူးပဲနဲ့ မိသားစုကိုလာဆဲ ဆိုနေကြသူတွေကိုဒဲ့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေး – XB Media & News
သရုပ်ဆောင်နဲ့ မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန်ကတော့ (၅၀၅) ကနဲ့ စကစရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့မှာတော့ အလုပ် ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းအတွက် ပိုင်တံခွန်ကို ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြပြီး ကရုဏာ ဒေါသ နဲ့ သူ့ရဲ့မိသားစုကို ပြစ်တင်ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့တာမို့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ မေချစ်သွေးက အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။
“အကြောင်းအရာ ဘာမှမသိပဲ အာချောင်ကြသူတွေကို ငါသည်းခံသင့်သလောက် သည်းခံပေးခဲ့ပြီးပြီနော်။ ေ-ာက်ကြောင်းမသိရင် ေ-ာက်အာမချောင်ပဲ ေ-ာက်ပေါက်ပိတ်နေကြ နောက်မှ ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့လိုင်းပေါ်ကနေ ဝမ်းနည်းကြောင်းကလွဲလို့ နင်တို့ ဘာများ လုပ်ပေးခဲ့ဖူးလဲ? သူ့အတွက် ထမင်း၊ဟင်း ချက်ပို့ပေးခဲ့ဖူးသလား? အဝတ်အစား၊ဆေး အစရှိသဖြင့် ဘာတွေများ
အဆငျပွအေောငျ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ဖူးသလဲေ-ာကျပိုတှပေဲ ရေးနေ ပွောနပွေီး မိသားစုထကျတောငျ ပိုပွီးပူဆှေးနရေသေးသ တဲ့”“အ ကောငျ့တှဝေငျကွညျ့လိုကျရငျ lock တှခေပြွီး ဝရမျးပွေးလိုလို နိုငျငံအတှကျ တအားကို အလုပျလုပျပေးနတေဲ့အထာတှနေဲ့ ေ-ာကျ ဦးနှောကျတှကေ အဝီစိကနကေို တကျမလာကွဘူး။
ဘယ်သူ့မှ ေ-ာက်ဂရုမစိုက်လို့ကို အေးဆေးနေနေတာ လာမထိကြနဲ့။ နောက်တစ်ခါ ss တွေနဲ့ပါ ချပြောမယ်🖕🏻 ဘာမှမသိပဲ မိသားစုဝင် တွေ ကို လာဆဲနေကြတဲ့သူတွေကို ပြောတာပါ.. တခြားသူတွေကိုတော့ ကန်တော့ပါဗျ🙏” ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန် ရဲ့မိသားစုဟာ ပိုင်တံခွန်အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး အခုလို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရချိန်မှာ လည်း ပူဆွေးသောကရောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ (၅၀၅) ကနဲ႔ စကစရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔မွာေတာ့ အလုပ္ ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါသတင္းအတြက္ ပိုင္တံခြန္ကို ပရိသတ္ေတြက စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး က႐ုဏာ ေဒါသ နဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုကို ျပစ္တင္ေျပာဆိုတာေတြရွိခဲ့တာမို႔ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မျဖစ္သူ ေမခ်စ္ေသြးက အခုလိုပဲေျပာလာပါတယ္။
“အေၾကာင္းအရာ ဘာမွမသိပဲ အာေခ်ာင္ၾကသူေတြကို ငါသည္းခံသင့္သေလာက္ သည္းခံေပးခဲ့ၿပီးၿပီေနာ္။ ေ-ာက္ေၾကာင္းမသိရင္ ေ-ာက္အာမေခ်ာင္ပဲ ေ-ာက္ေပါက္ပိတ္ေနၾက ေနာက္မွ ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ႔လိုင္းေပၚကေန ဝမ္းနည္းေၾကာင္းကလြဲလို႔ နင္တို႔ ဘာမ်ား လုပ္ေပးခဲ့ဖူးလဲ? သူ႔အတြက္ ထမင္း၊ဟင္း ခ်က္ပို႔ေပးခဲ့ဖူးသလား? အဝတ္အစား၊ေဆး အစရွိသျဖင့္ ဘာေတြမ်ား
အဆင်ပြေအောင် ပို႔ေဆာင်ေပးခဲ့ဖူးသလဲေ-ာက်ပိုတွေပဲ ေရးေန ေပြာနေပြီး မိသားစုထက်ေတာင် ပိုပြီးပူေဆွးနေရေသးသ တဲ့”“အ ေကာင်႕တွေဝင်ကြည်႕လိုက်ရင် lock တွေခႃပြီး ဝရမ်းေပြးလိုလို ႏိုင်ငံအတွက် တအားကို အလုပ်လုပ်ေပးနေတဲ့အထာတွေနဲ႔ ေ-ာက် ဦးေႏွာက်တွေက အဝီစိကနေကို တက်မလာကြဘူး။
ဘယ္သူ႔မွ ေ-ာက္ဂ႐ုမစိုက္လို႔ကို ေအးေဆးေနေနတာ လာမထိၾကနဲ႔။ ေနာက္တစ္ခါ ss ေတြနဲ႔ပါ ခ်ေျပာမယ္🖕🏻 ဘာမွမသိပဲ မိသားစုဝင္ ေတြ ကို လာဆဲေနၾကတဲ့သူေတြကို ေျပာတာပါ.. တျခားသူေတြကိုေတာ့ ကန္ေတာ့ပါဗ်🙏” ဆိုၿပီး ေပါက္ကြဲလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ ရဲ႕မိသားစုဟာ ပိုင္တံခြန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးဆိုတဲ့အရာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အခုလို အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရခ်ိန္မွာ လည္း ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။